7 Nzira To Stay Healthy Nepo Rokufambira | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Nzira To Stay Healthy Nepo Rokufambira
Nguva yekuverenga: 6 maminitsi(Last Updated On: 02/06/2020)
With matsva raitika coronavirus kukanda wose urongwa kufamba mu rakati nyangarara, zvingava zvakaoma kuziva kana iwe unofanira chengeta zororo renyu munguva coronavirus kana kwete. Nepo tisingagoni kuita kuti sarudzo iwe kana ukasarudza mberi zvakakosha kuti chokwadi uri kutora matanho okudzivirira utano hwako. Kuti zvidaro, pano vari 7 Mazano akaenderei kukubatsira neutano hwakanaka apo rokufambira.
Gara Healthy pavaifamba Number 1: Geza maoko
Uyu ingaita pachena, asi kugeza maoko ako ndeimwe yenzira kuti urambe wakasimba. Sei? Maererano National Health Service, “Kugeza maoko ako zvakanaka kunobvisa tsvina, nemavhairasi, uye utachiona kuvamisa kupararira kune vamwe vanhu uye zvinhu, izvo zvinogona kuparadzira zvirwere zvakadai poizeni, besa kana manyoka. Inogona kubatsira chichiita vanhu kubva Atora zvirwere vachiawaridza vamwe”.
Zvichitaurwa zviri nyore, Washing ruoko chinozadzwa kubvisa zvose gook iwe uchingounganidza yose zuva. Izvi zvinonyanya richikoshawo vafambi. Tourist site makazara gurusvusvu vanhu vanobva pasi pose. Kana chiuru vanhu pazuva vari kubata rimwe doorknob, uye rimwe chete asina kushamba maoko ake, funga kuti akasviba zvinofanira kuva!
Kana uri munzvimbo pasina kumhanya mvura yakakwana kana sipo, iwe unenge vanofanira kuva nechokwadi rawatenga uye vakashandisa ruoko sanitizer kugara. Nepo izvi zvinogona uchawomesa maoko enyu kana kushandiswa kakawanda, panewo shanduro ruoko sanitizer kuti zvinosanganisira moisturizing zvinoriumba saka unogona kuva maoko akachena uye ganda akapfava.
Hazvina kare kuzivikanwa kuti haana kurara zvakakwana isakarurama kunokanganisa zvirwere. Paaive pazororo zvingaita sokuti pfungwa yakanaka kumuka panguva mutswe chamambakwedza uye kumhanya kumativi kusvikira pakati pousiku. zvisinei, chokwadi ndechokuti kurara zvakakwana zvakawanda impactful mungadai pane kufunga. usiku, muviri wedu Zvinotora nguva kusimbisazve uye kunyange kuporesa. The shoma nguva yaunopedzera kumbotsumwaira nzira shoma nguva uchazonakidzwa kuti zvichengetedze.
Saizvozvo, ongororo kunyange dzakaratidza kuti vaya vasingadaro hope zvakakwana kunogona kutambura Migumisiro akadai cheBP uye kuyeuka kwenguva refu. Migumisiro izvi zvinogona chete chakawedzerwa apo hwokufambira, saka itai pachako nyasha nechokwadi waguma uswa kuti zvishoma maawa manomwe usiku.
Kunyange zvingave zvakaoma kuwana zzz zviri mukati kana iwe wafamba akati wandei nzvimbo dzenguva uye vari kurwara nejet lag, unogona kushandisa nzira dzakasiyana siyana kuti kubatsira muviri wako kufaranuka uye kukukurwa kure kuti hope. Izvi zvinosanganisira kwoushamwari yokugezera kana kugeza, Lavender-zvemiti inonhuhwirira pfapfaidzo, chirangariro, uye kunyange mukombe kwoushamwari yetii. In pfupi, kuwana zvakawanda kurara Zvinokosha kuti urambe wakasimba apo hwokufambira.
Marseilles kuenda kuLyon Chitima matikiti
Paris kuenda kuLyon Chitima matikiti
Gara Healthy pavaifamba And Dzivisa Tap Water
Kana uri kuenda kumwe zvikuru zvisingazivikanwi, izvozvo zvinofanira kuva pachena kuti uchaita vanofanirawo kudzivisa pombi mvura. Sei? Nekuti utachiona mukati mvura omunharaunda vari munharaunda-zvakananga, uye / kana dumbu bacteria havasi vose vakagadzirira kubata navo. Zviuru zvevanhu pagore kurwara kunwa mvura yeko, pamwe Migumisiro akadai kurutsa uye manyoka zvakajairika chaizvo. Sezvo muromo, rutanda mabhodhoro mvura pose muri kure kubva aunenge wajaira. Izvi unoenda Paarismängud kuti nzvimbo ine sketchy utsanana maitiro. Other zvishoma dzakabudirira vanogona kushandisa mvura yokunwa kubva kumwe sezvo chimbuzi basa nzvimbo. Ehe, ndicho chinhu!
wo, nechokwadi iwe hydrate zvakanaka. Hot tembiricha uye rinonetesa basa muri kukurumidza tikiti kuchipatara pasina kunwa mvura yakakwana.
Wana kwepfuti Your
Zvichienderana apo uri kuenda, ungafanira kuwana unyanzvi hwakasiyana kwepfuti pane kiriniki pakufamba kana zvimwe kurapwa centre. Izvi ndezvechokwadi kunyanya kune dzimwe nyika shoma dzakabudirira, izvo zvichiri mutambo zvirwere zvakadai semarariya yellow fever. Usati musoro parwendo rwenyu, kutarisa Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Website. Pano unogona kuwana kubva chaizvo zvinodiwa kuti nyika yauri kufamba. Kana iwe hausi kubva United States, unogona kutarisa vemunzvimbo website yako, dzakadai NHS, nokuti zvinodiwa zvenyu yokufamba utano.
Stay Healthy: Regai Musabata Your Face
Sezvatinoongorora kare taitaura Washing ruoko, zvino ndiyo nguva yehurukuro pamusoro pechiso chenyu. Kazhinji muchaona vanhu achizorora musoro wavo nemaoko, scratching imwe kuvava, kana zvimwe anobata zviso zvavo. Ndiyo tsika yakaoma kumedura asi chengeta maoko ako kure nechiso chenyu kana uri kuedza neutano hwakanaka vachiri rokufambira.
Hazvina pfungwa, sezvo maoko enyu kubata zvinhu zvakawanda saizvozvo pazuva. pane chitima kana ndege, uchava tireyi tafura, ari seatbelt. uye siyana zvimwe zvakafanana nzvimbo nzvimbo kuti iwe bata chauri. Kutoti uri kugeza maoko ako nguva dzose iwe kubata chinhu (kana kuitika kuti kupfeka magiravhusi), zviri pfungwa iri nane kuchengeta maoko ako kure nechiso chenyu nguva dzose.
Zvine musoro kuti uri kuenda kudya zvakanaka apo pazororo, rudyi? Shure kwezvose, chii Spain pasina chocolate churros, uye chii France pasina baguette? Izvi hazvisi izvo isu kureva, zvisinei.
Tasty chikafu ndiye zvose zvakanaka, asi unofanira kuva nechokwadi chokuti uri chikafu utano pamwe. Kutevera chikafu piramidhi uye chinja vaya Goodies kwakadzika-Fried vamwe Greens ose neapo. Kana uine nzvimbo, kuuya mavhitaminzi pamwe kuti urambe rine vakakwira. Ivai nechokwadi kuti auye vhitamini C, probiotics, uye nezvimwe nyore uchapedza mavhitaminzi.
Izvi zvinonyanya richikoshawo kuti kunwa doro pavaifamba uyewo. Chiri zvinozivikanwa kuti kunwa doro zvakanyanyisa kungaita kuti ashaye rokuzvidzivirira (uye vamwe vakaipa hangovers). Kana uri kuedza kudzivisa kurwara, nechokwadi iwe ramba doro kushoma. Shure kwezvose, who wants to visit the Mona Lisa with a common cold?
Last Stay Healthy Tip: Kuchenesa Area Your
Zvingava dzichikunetsa, asi zvakakodzera kuunza mamwe disinfecting ndokupisika pamwe newe pose iwe kufamba. Sei? Kuchenesa vose tireyi pamatafura uye zvigaro isu kare kutaurwa. Clorox ndokupisika zvinogona kutengwa zvakawanda ndokuiswa ziplock mumasaga. zvino unogona kuuya nazvo newe Itai dzenyu.
Ita chokwadi kutsakatisa nezvokutsamidza maoko, seatback homwe (kana uine mumwe), uye kunyange seatbelt bhakoro pamwe disinfectant wako rubatsiro nechokwadi kuti vekwaunogara dzezvitsigiro sezvo yakachena sezvinobvira.
Vanhu vanorwara pavaifamba kakawanda vanenge zvimwe. Musafanana wose. Zvichengetedze uye kushandisa Save A Train!
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Nzira To Stay Healthy Nepo Rokufambira” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fstay-healthy-while-traveling%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)